China Profaịlụ Door mkpọchi Nịm N'ihi Interior ụzọ rụpụta na Factory | YALIS
Profaịlụ ụzọ mkpọchi setịpụrụ maka ụzọ ime ụlọ
Nkịtị Mmecha: Mat nwa & nwa, Mat ojii na ọcha
Tinye mkpọchi ụzọ ụzọ YALIS minimalist na ọnụ ụzọ a na-adịghị ahụ anya, ọnụ ụzọ dị elu, iji mepee uru nke ọnụ ụzọ n'onwe ya, mebie agbụ ndị ahụ, wee gosipụta echiche enweghị ngwụcha nke imepụta ụlọ n'ogologo.
Ọnụ ụzọ ahụ bụ nke alloy aluminom, nke nwere ike ime ka otu ihe ahụ mechie dị ka ọnụ ụzọ aluminom iji mezuo mmetụta ọhụụ nke ụlọ. Enwere ike itinye ntinye nke obere ụzọ ụzọ nwere ike iji otu ihe ahụ dị ka elu nke ọnụ ụzọ ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ njikọta zuru oke na ọnụ ụzọ.
Ebumnuche mmeghe nke ime ihe ike
MULTIPLICITY nwere ikikere maka imeghe ime ihe ike. Oghere oghere bụ 23 Celsius, nke nwere ike igbochi njide ahụ ịdabere ma chebe nchekwa ezinụlọ.
Magnetik lach mkpọchi
Nnwale nke okirikiri nke mkpọchi magnet abanyela karịa 200,000 ugboro nke na-eme ka ojiji dị ogologo oge. Na mgbanwe iku ikpe-eme ka echichi ọzọ mfe. Ya zinc alloy lash na naịlọn uwe na n'èzí, nwere ike ime ka oghere na mmechi lorịị ma na-ebelata mkpọtụ nnyonye anya.
YALIS na-ahụ ngwaahịa dị ka ọrụ, ma mara na ahụmịhe bụ naanị isi ihe na ọkwa ahụ. Na usoro izugbe nke ịhazi ụlọ dum, YALIS na-agbaso ịdị n'otu nke ụdị ụlọ. ỌTULTUL MBA, na-eme ka ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ jikọtara ọnụ.
Nke gara aga: High-end Minimalist Door Aka Supplier
Osote: Imepụta Obere Minimalist Maka Ọnụ Profaịlụ
High-end Minimalist Door Aka Supplier